SH Muqtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur oo si aad ah uga carooday isku daygii lagu doonaayay in lagu dilo Abu Mansuur Al Amriki. |
SH Muqtaar Rooboow Cali Abuu Mansuur oo si aad ah uga carooday isku daygii lagu doonaayay in lagu dilo Abu Mansuur Al Amriki.
Afhayeenkii hore ee Ururka Al Shabaab Sheekh Mukhtaar Roobow Cali “Abuu Mansuur”, ayaa wuxuu si kulul uu uga carooday weerarkii Jimcihii shalay lagu qaarajin rabay Cumar Xamaami, balse isu magacaabay Abuu Mansuur Al Amriki.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali ayaa wuxuu gacanta ku hayaa Ciidamada Muhaajiriinta ee ka barbar dagaalamaaya Ciidamada Ururka Al Shabaab, wuxuuna si kulul uu uga carooday weerarkii lagu qaaday Abuu Mansuur Al Amriki.
Ilo wareedyo lagu kalsoonaan karo oo ku sugan Degmada Diinsoor, ayaa waxay sheegayaan in Sheekh Mukhtaar Roobow Cali uu la xiriiray Amiirka Al Shabaab Axmed Cabdi Aw Maxamed “Godane”, balse isu magacaabay Sheekh Mukhtaar C/Raxmaan “Abuu Zubeyr”.
Waxaa la sheegay inuu dhex maray hadalo kul kulul oo xasaasi ah, wuxuuna Sheekh Mukhtaar sheegay inaysan dib dambe ula shaqeyn doonin, Ciidamada Amniyaadka ee Al Shabaab.
Sidoo kale wuxuu ku goodiyay inaysan Ciidamada Amniyaadka ka hawl geli doonin Deegaanada ay gacanta ku hayaan. Sida laga soo xigtay ilo ku dhaw dhaw Sheekh Mukhtaar Abuu Mansuur.
Ciidamada Amniyaadka ayaa waxaa la sheegay in uu aas aasay Amiirka Al Shabaab, waxayna isugu jiraan dhawr nooc oo u tababaran siyaabooyin kala duwan, waxayna intoodu badan ay fuliyaan hawlgalada iyo dilalka qorsheysan.
Dhanka kale Ciidamada Sheekh Mukhtaar Roobow Cali ayaa waxay Jimcihii shalay weerareyn Ciidamadii Amniyaadka ee soo weeraray Abuu Mansuur Al Amriki, waxaana la sheegay inay ka dileen ilaa lix ka mid ah Ciidamadii Amniyaadka, oo uu ku jiro ninkii rasaasta la dhacay Abuu Mansuur Al Amriki.
Xiisada xilligaan u dhaxeysa hogaanka sare ee Al Shabaab ayaa waxay u muuqataa mid gaartay heerkeedii ugu sareysay, iyadoo ay inta badan dadku rumeysan yihiin inuu xumaa ebid xiriirka u dhaxeeya Sheekh Mukhtaar Roobow Cali iyo Amiirka Al Shabaab.
Deegaanka Raama Cadey oo qiyaastii 33km u jirta Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay, ayaa waxaa laga dareymayaa xaalad kacsanaan leh, waana bartii lagu dhaawacay Abuu Mansuur Al Amriki.
Ina Godane ayaa waxaa lagu xantaa in uu u sabab ahaa dilkii Ciidamada Dowladda ay sanadkii 2011-kii ay Isgoyska Ex Control Afgooye ugu geysteen Fasuul Cabdalla.
Sheekh Mukhtaar Roobow Cali “Abuu Mansuur” ayaa waxaa lagu tilmaamaa in uu yahay Sarkaalka ka tirsan Al Shabaab ee ugu Ciidamada badan, wuxuuna Deegaan ahaan uu ka soo jeedaa Gobolada Baay iyo Bakool.